Maitiro ekuwedzera mafonti muFedora | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuwedzera mafonti muFedora
Joaquin Garcia | | Kugoverwa, General
Mafonti emavara akakosha kwazvo asi zvakadaro akakosha kwazvo maitiro ekugadzirisa kune chero mushandisi, sezvo isingotibvumidze chete kuti tibate pachedu kuSoftware asi inogona kutibatsira kuchengetedza mazana ema euro kana kuita kuti kuverenga screen kuve nyore.
MuFedora zviri nyore kwazvo kuwedzera chinyorwa chemavara, font iyo chero mushandisi anogona kushandisa uye kunyangwe kuisa mune chero vhezheni yeFedora, ive yazvino kwazvo kana imwe yedzidziso dzekare.
Ikozvino pane nzira mbiri dzekuwedzera mafonti muFedora. Nzira yakachengeteka ndeyokuisa font kubva kumahofisi epamutemo. Maitiro anovimbisa kuti vese vashandisi vemakomputa vanokwanisa kuwana kune iyo sosi uyezve kuti iyo sosi haina kukuvadza vhezheni yeFedora yatinayo. Zvazviri tinoenda kuSoftware uye ikoko tinosarudza chikamu «Wedzera-ons» icho chichatiratidza runyorwa rweSource. Isu tinosarudza iyo yatinoda kuisa, tinya bhatani rekuisa uye ndizvozvo. Nzira yakapusa uye yakachengeteka.
Asi isu tingave nemafonti mafaira uye tinoda kuwedzera iwo kuFedora yedu mushandisi account. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuvhura mafaera uye tinya "Control + H" izvi zvinotiratidza mafaera ese akavanzika uye maforodha pane yedu system. Dhairekita inonzi «.fonts» inofanirwa kuoneka patinofanira kunama mafaera emafaira atinoda kuwedzera. Kana isu tisina iyi dhairekitori muFedora, tinogona kuigadzira (iine doti inosanganisirwa) uye tobva tateedzera mafaira emafaira ipapo.
Kana tangoita izvi, isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
iyo ichavaka zvekare ese system ndangariro uye inosanganisira iyo nyowani font kana mafonti atakawedzera. Maitiro acho ari nyore uye anotendera Fedora yedu kuve nemafonti kune vanhu vane dyslexia kana inki yekuchengetedza mafonti muprinta yedu patinodhinda zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuwedzera mafonti muFedora
Solution kune iyo "Verenga-chete faira system" kukanganisa